Na mgbakwunye na ịtụgharị uche ebe mara mma nke San Marino bara ọgaranya, ndị njem nleta na-aga mba a maka ịzụ ahịa . Nke a abughi ihe mgbagwoju anya, n'ihi na Republic of Light bụ mpaghara na-enweghị ọrụ, ma ozugbo a na-ebelata ọnụahịa niile na-eme nke a site na pasent 20 iji tụnyere Ịtali , dịka ọmụmaatụ.
Na San Marino, e nwere ihe dị ka ọkara 10 na nnukwu ọnụ ụzọ, nke n'ime afọ niile enwere ego na nchịkọta ndị nhazi nke oge gara aga site na 30% ruo 70%. N'ime oge ere ahịa, a na-eji ọnụ ahịa ụlọ ahịa na-ebelata ugboro abụọ ma e jiri ya tụnyere n'afọ. Nke a na-emekarị na Jenụwarị, February, July na August.
Ihe ndị mara mma
Mpaghara San Marino dị iche na nha na nhazi nke oghere ahia, na atụmatụ nke nnakọta ndị e nyere maka ire ere. Tụlee ihe ndị mara mma na ndị a ma ama:
San Marino Nwepụta Ụlọ ọrụ (n'ụzọ ọzọ - Big Chic) bụ otu n'ime ọnụala kachasị ochie, bụ nke na-ewu ewu na ndị njem nleta. Enwere ihe dị ka ụlọ ahịa 40 ebe ndị nwoke, ụmụ nwanyị, ụmụaka na-eyi nke Ịtali na nke ụwa, ihe ndị na-esi ísì ụtọ, akpa, ngwa, ọla na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ ga-adịrị gị ma ọ bụrụ na ị na-achọ uwe akwa na akpụkpọ ụkwụ site na ahịa ahịa maka ọnụahịa dị mma karịa ọnụ ọgụgụ karịa (Elena Miro, Calvin Klein, IceBerg, Anna Rachele, Cerruti, Facis, Datch, Borbonese). Nhọrọ nke ụdị okomoko (dị ka Armani, Baldinini, Lacoste, Pollini, Prada, D & G) bụ obere. Ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa na ọ bụghị akara, na àgwà na ụgwọ a na-apụghị ịghọta aghọta maka San Marino Factory. Azụmahịa ahụ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, ma e wezụga Monday, site na 10.00 ruo 19.30. Saturday na Sunday - ọkara otu awa aba.
Arca International Megastore bụ ụzọ ntanye nke na-agụnye nchịkọta ndị na-emepụta ihe dị iche iche: Just Cavalli, Versace, Armani, Ferre, Blumarine, Galliano na ndị ọzọ. N'ebe a, ị ga - achọta ihe ọ bụghị naanị site na nnakọta ndị gara aga, kamakwa site n'aka ndị dị ugbu a. Otú ọ dị, ekwesịrị ịdeba na njikwa a abụghị ihe dị iche iche nke ụlọ ahịa, ma na usoro nke nnukwu ụlọ ahịa. Ya mere, ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa na-achọsi ike na iji ejiji na trendy boutiques, ọnọdụ ahụ nwere ike imechu gị ihu. Ị nwere ike iji njikwa Arca ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ihe nke ndị na-emepụta ụwa na-emepụta ego na ọnụ ala. Ntaneti ahụ ga - emeghe Monday ruo Saturday site na 09.00 ruo 20.00.
Queen Outlet nwere ọnọdụ nke otu n'ime ụlọ ndị kachasị mma ma mara mma. Ebe a ị ga-ahụ ma okomoko na ọnụ, nakwa dị ka onye kwuo uche ụdị maka uka asịwo. A na-ahazi ndozi ahụ n'ụdị ụlọ ahịa na boutiques nke Italian na ndị ọzọ na Europe ụdị. Ọ na-arụ ọrụ site na 10:00 ruo 20.00 na Monday - site na 16.00.
Kedu otu esi esi abanye?
Ụlọ ahịa San Marino Factory na Arca International Megastore na-emegide ibe ha, yabụ ị ga-abịakwute ha n'otu njem ahụ. Ọtụtụ mgbe, ha na-aga site na bọs 7, nke si na Rimini malite nọmba nkwụsị 4 n'ihu ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Ịkwesịrị ịpụ na nkwụsị # 7 na strada Rovereta ma gaa ije nkeji 7 na Censiti Street ruo n'èzí. Ulo na bọs bụ € 1.2 ma were minit 30-40. Site na tagzi, ị ga-enweta n'ime nkeji 20-25, njem ahụ ga-eri gị € 35-40.
Queen Outlet dị kilomita 10 site na Rimini na kilomita 1 site na ókèala San Marino. Ị nwere ike iru obodo Serravalle nke ọma na ụgbọ ala A14, mgbe ahụ ị ga-aga Tre Settembre, 3.
Na ịzụ ahịa na San Marino, ị ga-atụle na site na June ruo ná mmalite September, enwere ndị na-eme njem nleta karịsịa. Nke a na - eduga n'eziokwu ahụ bụ na a na - ere ngwa ngwa n'úkwù. Ya mere, ọ bụrụ na ịnọghị njikere maka mmechuihu yiri nke ahụ, n'oge a, ọ bara uru ịga leta obere njem ma ọ bụ na-adịghị ewu ewu n'etiti ndị njem nleta: Atlante Shopping Center, Azzurro Shopping Center, Outlet Calzaturificio. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwa ụlọ na telephony, mgbe ọrụ gị meghere Ụlọ ọrụ Ịzụ ahịa Electronics.
Waterfalls nke Sweden
Ezigbo mmasị banyere Switzerland
Ebee ka ị ga-eri na San Marino?
Ememe na Liechtenstein
Liechtenstein - ebe nkiri
Liechtenstein - ọdịnala
Ememe na Czech Republic
Ọdụ na Czech Republic
Njem na Switzerland
Uwe elu n'elu tomato mgbe ị na-ebu
Nwepụta ebe a na-eji ejiji
Kedu uru dị halva?
Jacket na basque
Kerr, Ambrosio, Baldwin na nwa nwoke Cindy Crawford glitred na Moschino
Radonitsa - Gini ka m kwesiri ime taa, gini ka m kwesiri ime?
Jennifer Aniston juru ndị na-ege ntị anya na omume ya na Oscar-2017
Gini mere umu ovaries ji merie?
Iggy Azalea gosipụtara onye ọhụrụ na cellulite
Ihe oriri ọhụrụ nke Atkins ọhụrụ
Gucci mkpokọta - Mmiri-Summer 2015
Dorozhkina Tatyana - uwe mkpuchi
Prince Harry mere nnukwu nkwupụta banyere edina eze Diana
Propolis na mmanya - ngwa
Na akwụkwọ ahụ aja na-acha odo odo na mgbidi
Mgbu mgbu na isi
Nkọwa maka mgbakwasị ụkwụ
Na-agba si akpịrị akpịrị
Ihe àmà 5 na-awụ akpata oyi n'ahụ bụ na ndị mmadụ na-azụlite mmadụ
Chicken na ihe na-atọ ụtọ ma na-egbuke egbuke na Chinese - echiche kacha mma maka ịkụcha efere Asia
Uwema ndị inyom 2014
Ndị na-esi ísì ọjọọ na ndị poteto